Free online ọrụ. Ngụkọta oge turf
Ngụkọta oge turf
ịbịaru ọnụ ọgụgụ 1: 0.5 1 2 3 4 5 6 8 10
Ogologo nke ngalaba Y
Obosara nke ebe X
Roll ogologo A
Roll obosara B
Roll arọ V
Ndị na-eri ahịhịa 1 mpịakọta
Ọrụ 1 mpịakọta
Y - Ogologo nke ngalaba
X - Obosara nke ebe
A - Roll ogologo
B - Roll obosara
C - oke, nyere dị ka a pasent
V - ibu ibu nke otu mpịakọta, na kilograms
Họrọ ntụziaka nke stacking na-egosipụta na ịbịaru.
Gbakọọ-akwụ ụgwọ, ị nwere ike dee price kwa mpịakọta na-eri nke ọrụ maka stowage.
Mepụta gị na saịtị mara mma ezigbo ahịhịa enyemaka oge a na ala Rolling lawns. Ọ bụ a herbaceous cover, nke a na-ere na-apụta nke turf na enịm na ya na osisi nke turf ahịhịa.
A, mgbere na-inyefe lawns, na-enye aka na ha styling. Ma, na-enwe ihe ọmụma ụfọdụ, ị pụrụ ime ka ọrụ gị onwe gị.
Anyị omume ga-gbakọọ otú ọtụtụ na-apụta nke ahịhịa dị mkpa iji ike a ezigbo ahịhịa cover gị dum na saịtị. All mkpa ka ị mara maka nke a bụ size nke saịtị na otu mpịakọta turf ahịhịa, na pasent nke ngwaahịa ị na-achọ. Na ozi a, ị nwere ike mfe gbakọọ nọmba nke na-apụta na ị ga-mkpa, ha na-abụ na-eri. Mgbe ahụ, na ihe niile i nwere ime bụ ịzụta na-etinye gị ahịhịa n'ogige ma ọ bụ na n'ihu Lawn.
Landscaping ha na aka - ọ dị mfe.
Biko mara na pasent nke ngwaahịa kwesịrị 5 percent maka ot ibé na 10 nke ebe na ifuru akwa, ifuru akwa ma ọ bụ ubi ụzọ.
Tupu etinyewe ka Ịtọ nke ahịhịa, saịtị a ga-kwadebere. Ebe ọ bụ na ọ dị mkpa iji wepụ ihe nile irighiri, nkume, wepụ ata. Ala ga-aka pụrụ iche Chemicals na mmezi. Mgbe nke ahụ gasịrị ndokwa drainage. Ná ngwụsị nke preparatory frasi nke ahịhịa ebe jupụtara tụụrụ ala, na nke ikpeazụ izu tupu Ịtọ fertilized. Tupu ayak ahịhịa ma ọ bụrụ na ọ bụ n'ala akọrọ kwa, ọ ga-gwara.
Ugbu a ahịhịa nwere ike arụnyere. Nke a ga-eme ọ bụghị mgbe e mesịrị ka awa 72 si oge ahịhịa e ebipụ ebipụ. Ma ọ bụ, ma ọ bụrụ na a agaghị ekwe omume, ị kwesịrị ị idokwa na sod na a Come ntụpọ na mmiri ya oge ruo mgbe echichi.
Unu tojupụtara na-apụta na onye ọ bụla ọzọ ihe karịrị 4 n'ígwé. Ọbụna ezi lawns contraindicated oke ibu ibu.
Cheta, ọ bụ na-achọsi ike dina ahịhịa otu mgbe. Nke a ga-ike a ezigbo edo mkpuchi.
The oge kacha mma n'ihi na ayak turf a na-ewere na mmalite nke ọdịda ma ọ bụ mmiri. Ma ọ dị mkpa ka anyị cheta na ala ekwesịghị ịbụ n'oge a nke na friji ma ọ bụ oke mmiri.
Ịtọ sod amalite nso ka ebe ọ na-apịaji maka nchekwa. Ibute ahịhịa kwesịrị a ogologo akara. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, na-ekpuchi saịtị nke na-abụghị ọkọlọtọ udi, ike ebe na-emechi akpan ịkpụ iberibe turf si idobere.
Onye ọ bụla n'usoro nke mkpuchi kwesịrị ịmalite na-akwụsị na a zuru efere ma ọ bụ otu ahụ ga-abụ nke na-erughị ọkara ya. Ndị fọdụrụ obere iberibe na-etinye na n'etiti usoro, ma ọ bụghị na mpaghara.
Mgbe ẹkụre nke ọ bụla usoro nke compacted Lawn. Na e guzobere mounds ma ọ bụ depressions ga-ebulikwa turf na larịị n'elu n'okpuru. Mgbe ahụ, ahịhịa ọzọ compacted.
Ahịrị na-enịm na dechapụ ikwu na onye ọ bụla ọzọ, dị ka Masonry. Ọ dị mkpa iji hụ na turf efere ike na-enwe ibe ma adịghị yitewere.
Na-eje ije freshly tọrọ turf na-adịghị na-atụ aro.
Mgbe dechara ayak pitch, ọ dị mkpa iji jupụta ohere na ngwakọta nke pụrụ iche nkwonkwo. Ihe mejupụtara nke a ngwakọta na-adabere na ụdị ala gị na gị na saịtị.
Tọrọ ahịhịa kwesịrị ọma awụfu mmiri. Kwa square mita ga-ọbụlagodi 15 lita. N'oge na-esonụ n'izu otu ugboro n'ụbọchị ahịhịa atọ na-chọrọ.
Ihe a ọnwa mgbe e mesịrị ahịhịa mgbọrọgwụ ga na-eto eto na-adabere na nke e tọrọ sod, landscaping na ahịhịa ga-ike.
Mgbe di na nwunye nke izu mgbe ayak ahịhịa nwere ike ebipụ. Nke a ga-eme gafee ntụziaka nke ya styling na bee na naanị n'elu pupụtara. Ikpeazụ ahịhịa na-emekarị na-bee ke September.
N'oge opupu ihe ubi mgbe ala thawed, fertilized na mowed ahịhịa ọzọ, ma, igbupụ naanị Atụmatụ nke pupụtara.
N'oge okpomọkụ karị ọnwa, atọ ahịhịa kwesịrị banyere 10 ọ bụla ụbọchị.